Izimvo zokudibanisa ipiyano eludongeni kumhombiso | IBezzia
Iingcamango zokudibanisa ipiyano eludongeni kwi-décor yakho
UMaria vazquez | | Ifenitshala
Fumana indawo Khangela ipiyano eludongeni akusoloko kulula. Kumagumbi amancinci aneendawo ezivulekileyo kunzima kakhulu. Kodwa, zakuba zifunyenwe zinokuhonjiswa ngokumangalisayo njengoko uya kuba nexesha lokuqinisekisa.
Isithuba masingaze sibe yingxaki ukuhlakulela italente okanye uthando. E-Bezzia sabelana nawe ngemibono ethile dibanisa ipiyano ekhayeni lakho. Izimvo malunga nendawo kunye nokuhonjiswa kwayo, ukwenza iimeko ezahlukeneyo kakhulu. Ngaba siza kuqala?
2 Yibeke endaweni yeziko
3 Yidibanise kwifenitshala
4 Phambanisa udonga
5 Dare nge-acolor
6 Hombisa malunga nepiyano
Inyathelo lokuqala kukufumana ipiyano. Kwaye nangona iholo kunqabile ukuba ibonwe Njengendawo enokwenzeka, kuba ayisiyondawo ikhethwayo yendlu, eBezzia kubonakala ngathi ngumbono omnandi. Uzakufuna okungakumbi ukuhombisa eli gumbi, lihlala lincinci. Beka isambrela esime ecaleni kwepiyano, isikhongozeli sezitshixo kuso, kwaye ugqibezele ubomi obusaseleyo ngesikhumbuzo kunye nesityalo esincinci.
Yibeke endaweni yeziko
Igumbi lokuhlala yeyona ndawo ixhaphakileyo yokwenza imibala kwipiyano yodonga. Ihlala ikwindawo ekhethekileyo efana naleyo ibiya kuhlala eziko. Oku kwenza ukuba kube lula ukuqokelela usapho kwaye wonwabele umculo. Thatha ithuba lokusebenzisa ukuyenza ibe yindawo ekugxilwe kuyo, nokuba kungokudibanisa eludongeni olunemibala okanye wenze umahluko kuyo. Sukuba nexhala ukuba awazi ukuba ungayenza njani, sikunika imibono engezantsi kancinci.
Kukho amaxesha apho kungenakwenzeka ukwabela lonke udonga kwipiyano kwaye akuyomfuneko. Ipiyano eludongeni inokudityaniswa kwi- iimodyuli okanye ifenitshala yesiko. Ngale ndlela ufumana indawo yokugcina eyongezelelweyo. Isithuba onokuthi uphinde usisebenzise ukugcina iincwadi kunye namanqaku ezandleni.
Kutheni ungapeyinti ipiyano ngombala ofanayo nodonga? Sisixhobo sokuhombisa esingaxhaphazwanga kwaye esinako zisa uninzi lweempawu egumbini. Ukuba ubheja ukupeyinta zonke iindonga ngombala ofanayo, ezo zinto zithelekisa umbala ziya kutsala umdla kwigumbi. Ukuba, ngokuchaseneyo, uthatha isigqibo sokuqaqambisa udonga lwepiano ngombala owahlukileyo, uya kutsalela ingqalelo kuyo.
Ukupeyinta ipiyano yinto eqhelekileyo kwaye uya kufumana uninzi lwezifundo zokuyenza ngokuchanekileyo kumnatha. Ngaba uyayithanda le ngcamango? Ngoku kufuneka ukhethe umbala. Mthubi nepinki ziyimibala ekhaliphileyo eya kutsala ingqalelo kwipiyano yodonga. Ipiyano etyheli iya kulungelelana ngokobume bendawo kwindawo ephucukileyo ehonjiswe ngeethoni ezimnyama okanye iindawo ezinomlinganiswa oshishino. Ipinki, kwicala layo, lukhetho oluhle kakhulu lokudala iindawo ezintsha, zangoku kunye nezobuchule.
Omnye umbala odumileyo wokupeyinta ipiyano eludongeni luhlaza okwesibhakabhaka. E-Bezzia sithanda ngokukodwa luhlaza okwesibhakabhaka kunye nemibala engwevu. Nokuba ngowuphi umbala owukhethayo, ukubandakanya iziqwenga ezincinci zokuhombisa ngombala ofanayo kwigumbi kuya kukunceda wenze indawo ehambelanayo.
Hombisa malunga nepiyano
Ukudala imeko emnandi ngepiyano njengeziko elinokubakho ngezinto ezimbalwa. Ngaba ujonge indawo ezolileyo? Umzobo kunye nesibane esincinci okanye ikhandlela lale mihla linokwanela. Ungasitshintsha kwakhona isakhelo nge isipili esijikelezileyo kwaye ubeke ivazi encinci ngeentyatyambo zasendle ukuze ubambe indalo. Khumbula, ewe, ukuba isipili siya "kukunyanzela" ukuba unakekele umhombiso eludongeni olwahlukileyo, oluya kuba lolunye olubonakaliswayo.
Ukufezekisa imeko yendalo engakumbi, ukubheja izityalo kunye neziqwenga zamagcisa. Beka isityalo eside ecaleni kwepiyano eludongeni kunye nezinye ezincinci ngaphezulu, zidityaniswe nezikhumbuzo. Ukuzisa ukufudumala kwindawo, unokubandakanya umbhoxo kwiitoni zendalo okanye ezibomvu kakhulu ukujonga umoya ngakumbi we-bohemian. Kwaye ukuba ubuninzi bento yakho, ungathandabuzi kwaye ugqume udonga ngemizobo yobukhulu obahlukeneyo kunye nezitayile.
Ungayihombisa njani indawo engqongileyo yepiyano? Ungayibeka phi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ukuhonjiswa » Ifenitshala » Iingcamango zokudibanisa ipiyano eludongeni kwi-décor yakho
Ungenza ntoni xa abantwana besilwa ngalo lonke ixesha
Ngaba unokuya kwiketo yokutya ngelixa ukhulelwe?